हुलाक कार्यालय बाट बैंङ्किङ सेवा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
हुलाक कार्यालय बाट बैंङ्किङ सेवा
बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०६:४७ मा प्रकाशित !
१९ फागुन​, इलाम। बढ्दो आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हुलाकमा चिठ्ठीपत्र आदानप्रदान हुन छाडेपछि जिल्ला हुलाक कार्यालय इलामले बैंङ्किङ सेवा दिन थालेको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयअनुसार हुलाकले प्रदान गरेको बैङ्किङ सेवाबाट हालसम्म ६ करोड निक्षेप सङ्कलन भएको छ ।
न्यूनतम ५० देखि एक सयसम्म बचत गर्न मिल्ने सो सेवामा हालसम्म दुई हजारभन्दा बढीले खाता खोलेका कार्यालयले जनाएको छ । साधारण बचत खातामा तीन प्रतिशत र ज्येष्ठ नागरिक बचत खातामा चार प्रतिशत ब्याजदर दिने व्यवस्था रहेको जिल्ला हुलाक अधिकृत जुवालदास राईले बताए ।
विसं २०३३ बाट बचत सेवा प्रदान गर्न थालेको कार्यालयले स्थायी कर्मचारीलाई आठ प्रतिशत ब्याजदरमा रु चार लाखसम्म ऋण लगानी गरेको छ । विसं २०२६ मा छोटी हुलाकका रूपमा स्थापना भएको हुलाक २०३२ सालबाट जिल्ला हुलाक कार्यालयका रूपमा सेवा दीरहेको छ । हुलाकको बैङ्किङ सेवाप्रति विश्वास बढ्दै गएकाले बचत गर्नेको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको अधिकृत राईले बताए । मोबाइल, इमेल इन्टरनेट, फेसबुकका कारण हुलाकमा चिठ्ठीपत्रको चाप घटेको हो ।
इलाममा एक जिल्ला, ११ इलाका र ४० अतिरिक्त हुलाक रहेका छन । राईका अनुसार हुलाकमा अहिले दैनिक व्यक्तिगत चिठ्ठी थोरै मात्र आउने गरेका छन । विगतभन्दा ४० प्रतिशतले चिठीपत्र आदानप्रदान घटेको कार्यालयले जनाएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: अन्तर्राष्ट्रिय मिस प्रतियोगिता काठमाडौँमा
NEXT POST Next post: एमालेको मेची–महाकाली अभियान
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०६:४७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०६:४७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०६:४७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०६:४७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०६:४७